Ndụmọdụ iji nwetakwuo ndị debanyere aha YouTube iji nye gị "Ekele ekele" - SoNuker
Ndụmọdụ iji nwetakwuo ndị debanyere aha YouTube iji nye gị "Ekele dị ukwuu"
Na 21 Julaị 2021, YouTube weputara njiri ọhụrụ nke nyere ndị okike ọdịnaya ụzọ ọzọ isi kpata ego na YouTube. Njirimara a, nke akpọrọ Super Daalụ, bụ mgbakwunye nke anọ na ngwa ọrụ ego ọzọ maka ndị okike nke mejupụtara -
Ndebanye aha ọwa YouTube
Nnukwu akwụkwọ mmado
Ekele kacha mma YouTube bụ n'ezie nnukwu ndụmọdụ maka ndị na-emepụta ọdịnaya na YouTube. Site na onyinye Super Thanks, ndị na-ekiri nwere ike hapụ ozi na ngalaba nkọwa nwere ntụnye nwere ike isi na $2 ruo $50 na ego mpaghara. Ozi a ga-apụta ìhè na ngalaba nkọwa. Na mgbakwunye na ịmepụta ego, njirimara a ga-enyekwara ndị okike aka ime ka mmekọrịta ha na ndị na-ekiri ha sie ike.
Njirimara Super ekele dị ugbu a na mba 68 gburugburu ụwa, gụnyere United States, United Kingdom, India, Australia, France na ọtụtụ ndị ọzọ. YouTube na-anwa iwepụta atụmatụ a maka ụwa fọdụrụ na njedebe nke 2021.
Ọ bụrụ na ị na-achọ ntuziaka ga-enyere gị aka n'ịzụlite atụmatụ iji nwetakwuo Super Ekele site na ndị debanyere aha YouTube gị, mgbe ahụ ị nọ n'ebe kwesịrị ekwesị. Site na ndụmọdụ ole na ole na-esonụ, ị ga-enwe ike ịkwalite njikọ aka ka mma n'aka ndị na-eso ụzọ gị.
Otu esi eme Super ekele na YouTube
Iji nweta uru nke njirimara a, ihe mbụ ị ga-eme bụ ime ka Super Daalụ maka ọwa YouTube gị. Enwere ike ime nke a na usoro ole na ole ndị a -
nzọụkwụ 1: Banye na YouTube Studio
nzọụkwụ 2: Pịa ego site na menu n'aka ekpe.
nzọụkwụ 3: Pịa na taabụ 'Supers' wee soro ntuziaka.
nzọụkwụ 4: Mgbe-emecha ntuziaka, ị ga-enweta a 'Super ekele' button na mgbanaka / gbanyụọ bọtịnụ na taabụ. Ị nwere ike ịgbanye bọtịnụ a.
Ozugbo emechara usoro a, bọtịnụ ekele ga-apụta na vidiyo gị niile, gụnyere ndị gara aga. Agbanyeghị, ọ gaghị apụta na Premieres ma ọ bụ iyi dị ndụ.
Ndụmọdụ maka ị nweta ihe kacha mma na Super ekele
Maka ndị na-emepụta ọdịnaya, Super Daalụ bụ nnukwu njirimara iji kpata ego na YouTube. Enwere ike nweta uru nke njirimara a naanị ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịnye ndị debanyere aha ọdịnaya dị mma. Nke a bụ ndụmọdụ ole na ole ị nwere ike iji nwetakwuo Super Ekele n'aka ndị debanyere aha gị-
1. Kpọọ ka Action
Ị nwere ike ịnwa ịkọ atụmatụ Super Daalụ na vidiyo gị. Ọ ga-ekwe omume na ị nwere ọtụtụ ndị na-ekiri nwere ekele maka ọrụ ị tinyere mana ha amaghị njirimara a.
2. Daalụ ndị na-ekiri gị
Gosi obi ekele gị n'ebe ndị na-ekiri gị na-enye onyinye Super Daalụ na ngalaba nkwupụta gị. Site na iji ozi nkeonwe gị na ndị na-ekiri gị na-emekọrịta ihe, ị nwere ike hụ na ha lọghachiri maka vidiyo gị karịa. Ndị na-ekiri ndị ọzọ nwekwara ike inwe mmụọ mmụọ inye onyinye mgbe ha hụrụ ndị mmadụ na-eji njirimara Super Daalụ.
3. Mara ndị na-ekiri
Kwado ndị debanyere aha YouTube na-eguzosi ike n'ihe na-enye gị ekele dị ukwuu site n'oge ruo n'oge. Ndị a bụ ndị debanyere aha kwenyere na ọdịnaya ị na-eke. Debe opekata mpe ise ma ọ bụ isii n'ime ndị debanyere aha gị na-eguzosi ike n'ihe wee kwuo ha na vidiyo gị. Nye ha otuto ederede n'oge.
4. Chetara ndị na-ekiri ya
Ị nwere ike ichetara ndị na-ekiri ụzọ ndị a onyinye ekele Super na-enyere aka n'ịkwado ọrụ ma ọ bụ ihe kpatara ya. Ị nwere ike ịkwalite nkwado nke ndị debanyere aha gị site n'itinye ihe mgbaru ọsọ maka onyinye na ịkekọrịta ya na ndị na-ekiri gị.
5. Jiri ihe ịma aka
Ị nwere ike iji ihe ịma aka iji nwetakwuo onyinye Super ekele sitere n'aka ndị debanyere aha gị. Mgbe ọ bụla ị ruru obere ọnụ ụzọ ma ọ bụ ihe dị ịrịba ama na onyinye gị, ị nwere ike chepụta ụzọ okike iji mezue ihe ịma aka maka ntụrụndụ nke ndị na-ekiri ya.
Ọ dị mkpa icheta na YouTube bụ netwọk mmekọrịta. Ị nwere ike itolite ọwa gị wee nweta ntọala ndị debanyere aha na-eguzosi ike n'ihe site n'ilekwasị anya na akụkụ mmekọrịta nke ikpo okwu a. Ọ dị ezigbo mkpa ka gị na ndị na-eso ụzọ gị na-akpakọrịta site n'oge ruo n'oge. SoNuker.com nwekwara ike inyere gị aka na nke a ma nye gị ndị debanyere aha YouTube n'efu. Anyị na-enye ọtụtụ ọrụ YouTube maka itinye aka na ịnya ụgbọ ala maka ọwa gị. Ị nwekwara ike zụta ihe YouTube, na-ekerịta na mmasị na SoNuker. Ka ịmatakwu gbasara ọrụ YouTube adịchaghị mma, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị taa!
Ndụmọdụ iji nwetakwuo ndị debanyere aha YouTube iji nye gị "Ekele dị ukwuu" nke ndi dere SoNuker, 2 December 2021
Nduzi gị Iji kpọlite ​​Youtube Youtube ọwa gị: Nkebi nke 2 - Iwulite Ihe Ọhụrụ
Mepụta ọwa YouTube nke ọma bụ ọrụ dị elu ma nwee ike iche na ọ baghị uru. Ọtụtụ mmadụ na-achọta onwe ha ịmalite na ịnụ ọkụ n'obi niile. Ma ebe n'ụzọ, ha na-enye elu na-ahapụ ...
Ntuziaka gị na-ebilite na nke ochie gị ọwa YouTube: Nkebi nke 1 - runcha Ochie
Ọtụtụ na-ebugo vidiyo ole na ole wee chefuo ọwa ahụ kpamkpam. Ha na-alọghachite mgbe izu ole na ole gachara wee chọpụta na ọ dịkarịrị onye ọ bụla hụrụ vidiyo ndị ahụ. Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị a…
Kedụ ka Mgbasa ozi YouTube ga-esi mee ka ọnye mara?
You ma na YouTube nwere ihe karịrị ndị ọrụ ijeri 2? Nnukwu usoro mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe ya ruru 18-49 afọ na US karịa netwọọdụ USB ọ bụla. Na 2025, a na-ebu amụma na ọkara nke US….
Ntuziaka gị maka ịmepụta ahịrị mkpado maka Akaụntụ Mmetụta YouTube gị